Nahatratra 31.730 tamin’ny taona 2018, nidina ho 28.715 tamin’ity taona 2019 ity. Enina taona no zandriny indrindra ary 29 taona no zokiny izay samy vehivavy. Raha ny fanazavan-dRamananantony Lalaina, lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra dia noho ny havitsian’ireo mpianatra tao amin’ny taona fahefatra niakatra tao amin’ny taona fahadimy mihitsy no nampitontongana io isa io. Tsy niova anefa ny fanomanana ho an’ity fari-piadidiam-pampianarana iray ity izay nofaranany tamin’ny fanaraha-maso sisa omaly hariva. Tanjon’izy ireo ny hirotsahan’ireo mpitsara ny fanadinana avy hatrany manomboka rahampitso alarobia. Ny alakamisy kosa izy ireo no hampiditra ny naoty anaty solosaina ary kasaina havoaka amin’ny faran’ny herinandro ihany ny vokatra. Tsiahivina fa foibem-panadinana miisa 44 no handray ireto mpiadina eto Antananarivo Renivohitra ireto anio talata 27 aogositra ary 16 ireo toerana hanaovana ny fitsarana. Amin’ny 7 ora sy sasany maraina no hanomboka ny fiantsoana anarana. Amin’ny 8 ora no hanomboka ny fanadinana. Ny taranja opération, probleme, SVT ary ny tantara no hisantaran’ireo mpiadina izany ny maraina. Ny malagasy sy ny frantsay ary ny geografia kosa no hamaranana azy anio hariva.
Mbola nampahatsiahy ny tsy tokony hanadinoana ny “convocation” sy ny fitaovana ilaina ny mpanabe omaly, toa ny Talen’ny EPP Analakely Rtoa Razafindranivo Nadia. Miisa 73 ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana CEPE anio ho an’io sekoly io.